Imandarmedia.com.np: तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? अनुहारनै परिवर्तन गरिदिने यि उपायहरु अपनाउनुहोस्
Lifestyle » तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? अनुहारनै परिवर्तन गरिदिने यि उपायहरु अपनाउनुहोस्
तपाईलाई गोरो हुने मन छ ? अनुहारनै परिवर्तन गरिदिने यि उपायहरु अपनाउनुहोस्
टिभी, पत्रिका अनि रेडियोमा हामीले धेरैजसो गोरो र चम्किलो छालाका लागि आएका कसमेटिक्स सामानहरुका विज्ञाजन देख्दै अनि पढदै सुन्दै आएका छौ ।
के सुन्दरता त्यती महँगो छ त ?परापुर्वकालमा अदभुत सुन्दरिहरु यी व्यवसाहीक अनि प्रशोधीत उत्पादन बिनानै के कारणले त्यति सुन्दर थिए त ?
नोट: “माथि उल्लेखित स्वास्थ्य सम्बन्धि जानकारी विभिन्न अनलाइन तथा पत्र-पत्रिकाहरुबाट साभार गरिएको हो। यी बिषयवस्तुहरु केवल जानकारीको लागी मात्र यहाँहरु समक्ष प्रस्तुत गरेका हौँ।